लिनक्सबाट Chromecast मा अडियो र भिडियो कसरी कास्ट गर्ने लिनक्सबाट
लिनक्सबाट Chromecast मा अडियो र भिडियो कसरी कास्ट गर्ने
chromecast हाम्रो टिभीमा प्रसारण गर्न यो सब भन्दा धेरै प्रयोग गरिएको उपकरण बन्न गइरहेको छ जुन हाम्रो कम्प्युटर, मोबाइल वा ब्राउजरमा पुन: उत्पादन गरिन्छ। लिनक्स प्रयोगकर्ताहरूसँग नेटिभ प्रकार्यता हुँदैन जुन हामीलाई अनुमति दिन्छ लिनक्स अडियो र भिडियो Chromecast मा कास्ट गर्नुहोस्, त्यसैले हामीले अनुप्रयोगहरू छनौट गर्न पर्छ जस्तै mkchromecast, जसले हामीलाई यस उपकरण प्रयोग गरेर हामी हाम्रो टेलिभिजनमा हेर्न चाहान्छौं सामग्री सजिलै प्रसारित गर्न अनुमति दिन्छ।
1 Chromecast के हो?
2 Mkchromecast के हो?
3 Mkchromecast कसरी स्थापना गर्ने र प्रयोग गर्ने?
4 YouTube बाट Chromecast मा कास्ट गर्नुहोस्
Chromecast के हो?
यो एक HDMI उपकरण हो जुन एक USB ड्राइभसँग मिल्दछ कि Wi-Fi नेटवर्कमा जडान भएका मल्टिमेडिया उपकरणहरूबाट सिग्नल खिच्नको लागि टिभीसँग जडित छ। यस उपकरणको साथ हामी मल्टिमेडिया सामग्री हेर्न सक्दछौं जुन हाम्रो कम्प्युटर, मोबाइल फोन र वेब ब्राउजरबाट पठाइएको छ।
Mkchromecast के हो?
यो खुला स्रोत उपकरण हो, भित्र लेखिएको अजगर र तपाई के प्रयोग गर्नुहुन्छ node.js, ffmpego avconv लिनक्सबाट Chromecast मा अडियो र भिडियो प्राप्त गर्न।
mkchromecast अडियो र भिडियो क्वालिटी नगुमाकन हाम्रो क्रोमकास्टमा मल्टिमेडिया पठाउनुहोस्, यो बहु स्ट्रिमहरू, उच्च-गुणवत्ता २ 24-बिट / k k केएचजेड अडियो रिजोलुसन, यूट्यूबबाट प्रत्यक्ष स्ट्रिमि,, आधुनिक क्रोमकास्ट मोडलहरूमा उपस्थित अन्य सुविधाहरूसँग पनि उपयुक्त छ।
उपकरण एक उत्कृष्ट उपयोग प्यानलबाट सुसज्जित छ, जुन हाम्रो इनबक्समा प्रदर्शित हुन्छ। त्यस्तै, को स्थापना mkchromecast यो लगभग सबै लिनक्स डिस्ट्रॉस मा सीधा छ।
Mkchromecast कसरी स्थापना गर्ने र प्रयोग गर्ने?
कुनै पनि लिनक्स डिस्ट्रोमा हामी मिथ्रो क्रोमकास्टलाई सोझै गितुबमा होस्ट गरिएको सोर्स कोडबाट स्थापना गर्न सक्दछौं, यसको लागि हामीले निम्न चरणहरू गर्नुपर्दछ:
उपकरणको आधिकारिक भण्डार क्लोन गर्नुहोस्, वा असफल हुँदै, अनुप्रयोगको स्थिर संस्करण डाउनलोड गर्नुहोस् यहाँ.
हामी नयाँ क्लोन गरिएको फोल्डरमा जान्छौं र फाइलको साथ पाइप स्थापना कार्यान्वयन गर्न अगाडि बढ्छौं requirements.txt जसले उपकरणको लागि ठीकसँग काम गर्नको लागि सबै आवश्यक निर्भरताहरू समावेश गर्दछ (केहि अवस्थाहरूमा उपकरण sudo को साथ चलाउनुपर्दछ):
डेबिया, उबुन्टु र डेरिभेटिभ प्रयोगकर्ताहरूले उपकरणलाई सिधै आधिकारिक भण्डारहरूबाट स्थापना गर्न सक्दछन्, मात्र कन्सोलबाट निम्न आदेश चलाउनुहोस्:
तिनीहरूको अंशका लागि आर्च लिनक्स प्रयोगकर्ता र डेरिभेटिभहरूले AUR भण्डारमा उपलब्ध प्याकेज प्रयोग गर्न सक्दछन्
हामी विकास टोली द्वारा वितरित निम्नलिखित gif मा विस्तृत रूपमा यो अनुप्रयोगको व्यवहार र प्रयोगलाई कल्पना गर्न सक्दछौं। हामी आधिकारिक उपयोग ट्यूटोरियल पनि देख्न सक्छौं यहाँ.
YouTube बाट Chromecast मा कास्ट गर्नुहोस्
विशेष रूपमा यस अनुप्रयोगको बारेमा मलाई मनपर्ने कुरा यो हो कि हामी कन्सोलबाट हाम्रो क्रोमकास्टमा प्रत्यक्ष रूपमा YouTube भिडियो प्रसारित गर्न सक्दछौं, यसको लागि हामीले निम्न आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ:
कुनै श doubt्का बिना, एउटा उपकरणले हामीलाई हाम्रा मल्टिमेडियालाई लिनक्सबाट क्रोमकास्टमा सजिलो, द्रुत तरिकामा र गुण नगुमाउन पठाउन अनुमति दिनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: लिनक्सबाट » aPLICACIONES » लिनक्सबाट Chromecast मा अडियो र भिडियो कसरी कास्ट गर्ने
म यस उपकरणलाई क्रोमकास्टको लागि धेरै प्रयोग गर्दछु, यसले यसमा धेरै सुधारको अनुमति दिन्छ। तपाईं कुनै पनि भिडियो फाईल पठाउन सक्नुहुन्छ
कास्टन्यु केवल भिडियो फाईलहरू पठाउनको लागि हो, तर वास्तविक समयमा अडियो पठाउनको लागि होईन।
Muammar लाई जवाफ दिनुहोस्
महान @ लगार्टो, धन्यबाद।
कार्लोस मोरेनो भन्यो
मल्टिमेडिया बहुवचनमा अपरिहार्य छ। तपाईंले कहिले "मल्टिमेडिया" भन्नु हुँदैन।
कार्लोस मोरेनोलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाईको स्पष्टीकरणको लागि धेरै धन्यबाद प्रिय, मैले सुधार गरेको छु र मेरो विचारलाई तपाईको विचारमा धन्यवाद
म दिन को लागी यस्तै केहि खोज्दै छु। धन्यवाद !!
सेन्होर पाक्किटो भन्यो
चाखलाग्दो। म यसलाई कुनै श .्का बिना प्रयास गर्नेछु।
प्रश्न यो छ कि फायरवाललाई कसरी कन्फिगर गर्ने। क्रोम को लागी, उदाहरण को लागी, म यसलाई कन्फिगर गर्न को लागी सकेको छैन र फायरवाल असक्षम भएको सामग्री मात्र (युट्यूब वा जे होस्) पठाउन।
कसैलाई थाहा छ कि यसलाई कन्फिगर कसरी गर्ने?
Senhor Paquito लाई जवाफ दिनुहोस्
यदि तपाईं उबुन्टु प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ https://github.com/muammar/mkchromecast/wiki/FAQ#i-am-using-ubuntu-firewall-how-can-i-use-mkchromecast-with-it.
वास्तवमा, म उबन्टु प्रयोग गर्दछु (माफ गर्नुहोस्, तर मैले यो भन्न भने सकिन) र अबदेखि, म फायरवाल असक्षम बिना क्रोमकास्ट पनि प्रयोग गर्न सक्दछु।
म फेरि जवाफ दिन्छु, तपाईंलाई भन्नुहोस् कि पोर्ट opening००० खोले पछि, मैले भर्खरैमा रिबुट गरेँ, क्रोम खोलें र क्रोमकास्ट हेर्न सकें, त्यसैले मैले सोचे कि पोर्ट प्रणाली स्तरमा मान्य छ र कुनै पनि अनुप्रयोगले Chromecast मा सामग्री पठाउन सक्दछ। खोल्नुहोस्
तर अर्को पटक मैले यसलाई प्रयास गरेकोले यसलाई जोडिएको छैन। यस्तो देखिन्छ कि पहिलो पटक फायरवालले सुरु हुनको लागि केही समय लिएको थियो, र त्यसैले यो पहिलो पटक काम गर्‍यो।
त्यसोभए म बुझ्छु कि पोर्ट 5000००० केवल mkchromecast को लागि हो, हैन?
हो, मलाई माफ गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ कि मैले गलत लेखेको छु। तर सिद्धान्तमा फायरवाल भएको र क्रोम प्रयोग गर्दा त्यहाँ कुनै समस्या हुनु हुँदैन। मैले परीक्षण गरेको छैन, किनकि म डेबियन प्रयोग गर्छु। र हो, पोर्ट 5000 केवल mkchromecast को लागी आवश्यक छ।
आधिकारिक उबन्टु रिपोजिटरीबाट mkchromecast स्थापनाको सम्बन्धमा, यो ध्यान राख्नु पर्छ कि प्याकेज उबन्टु १.16.04.०16.10 भण्डारहरूमा छैन। मैले जे देखेँ, त्यस्तै देखिन्छ कि यो केवल उबन्टु १..१० को रूपमा उपलब्ध छ।
र जेनोटु डिस्ट्रोजमा ??
म मेरो Sabayon लिनक्स मा निरपेक्षताको समाधान पाउन सक्दैन।
कोडडेक्लोरर: ब्राउजरबाट वेबसाइटहरू विकास गर्नुहोस्
OSRFramework को साथ एक भर्चुअल जासूस बन्नुहोस्